Home » Akụkọ ụgbọ elu » VistaJet dekọtara pasent 81 nke ụgbọ elu na-aga Hawaii
VistaJet dekọtara pasent 81 nke ụgbọ elu na-aga Hawaii
VistaJet na-akọ nnukwu mbuli elu gafere ebe ugwu North America
West Coast, Caribbean na Mexico dị njikere maka nlọghachi dị ukwuu na ọkwa ọrịa na-efe efe
Ndị ahịa na-ekwupụtawanye mmasị n'ebe ndị North America na-aga n'akụkụ West Coast, Caribbean na Mexico
Gbọ njem na Hawaii mụbara 81% na ọnwa abụọ mbụ nke 2021 mgbe ọ na-atụnyere nke mbụ ọrịa 2020 na-efe efe
VistaJet, ụlọ ọrụ ụgbọ elu azụmahịa zuru ụwa ọnụ, taa kwupụtara ọkwa dị elu nke ụgbọ elu na-abata na ahịa njem ndị a ma ama, gụnyere azụmahịa ụgbọelu nke ọdịnala na ebe ezumike dị ka Los Angeles na Las Vegas.
Na-atụgharị uche ọzọ dị mma nke na-egosi nlọghachi nke ụlọ ọrụ njem, ọ na-egosipụtakwa na ịdabere na njem nke onwe dịka ahụike na nchekwa na-abụ ihe kachasị elu n'etiti ndị njem America. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke ndị UHNW nwere mmasị karịa karịa ka ha na-eme site na iji ụgbọelu nkeonwe, nke ha na-atụle ihe nchebe ụgbọ elu dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi.
N'okpuru ebe a bụ ebe ise ebe VistaJet nwetarala ọhụụ pụtara ìhè:
California: VistaJet dekọtara 57% mmụba nke okporo ụzọ na mpaghara Los Angeles ka ukwuu mgbe ọ na-atụnyere Jenụwarị na Febụwarị 2021. Ọzọkwa, enweela mmụba 7% na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na-apụ na Bay Area mgbe atụnyere ọrịa na-efe efe na Jenụwarị 2019 ruo 2021. Njem site na mpaghara mpaghara rue mba ndi ozo gunyere Central America, Caribbean na Japan.
British Virgin Islands: Ije ozi na British Virgin Islands nwere ihe karịrị okpukpu abụọ. VistaJet na-atụ anya na okporo ụzọ na mpaghara a ga-anọgide na-enwe nnukwu agụụ ka ndị ahịa na-ele anya inyocha, zuru ike ma jikọta na ebe ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ.
Hawaii: Gbọ njem n'ime agwaetiti rịrị elu 81% na ọnwa abụọ mbụ nke 2021 mgbe ọ na-atụnyere nke mbufe ọrịa 2020. VistaJet na-atụ anya ka mmụba nke okporo ụzọ na-adịgide adịgide ka ndị ahịa na-achọ ihu igwe ihu igwe oge gburugburu.
Las Vegas: Ka ọ na-erule Jenụwarị 2021, okporo ụzọ a na-abịarute ogo 2020 na-efe efe. Ka ọ dị na Febụwarị 2021, VistaJet na-ahụ okporo ụzọ mba ofesi na mpaghara a ma na-atụ anya ka ọchịchọ na-arịwanye elu n'afọ niile.
Cabo, Mexico: Mgbe ị na-atụle ọdịda 2019 ka ọ daa na 2020, enwere ịrị elu 900% na ndị bịarutere Cabo; VistaJet na-atụ anya ka usoro a gaa n'ihu maka 2021 ka ndị ahịa na-achọ ihu igwe na-ekpo ọkụ.
Nchebe na njem aghọwo otu ihe ahụ, na ụlọ ọrụ ụgbọelu nke onwe ha nwere ịrị elu dị elu na ndị ahịa mbụ na afọ gara aga, gụnyere mmụba 29% na ndị ọhụrụ nọ na VistaJet - nke ka bu uzo ahia ahia ahia nke ugbo elu ugboelu nke onwe. Dika ulo oru ugbo elu nke onwe nke mbu nke mere njem ugbo elu kariri mba 187, VistaJet di njikere ino n’iru njem nke North America na nke uwa. VistaJet na-ahụrịrị ọtụtụ ntinye akwụkwọ, na-achọ ịnya ụgbọ elu karịa 50% nke otu ụgbọ mmiri na US. Ka ọ dị ugbu a, ndị ahịa ahụ na-ekwupụta mmasị dị elu na njem North America n'akụkụ West Coast, Caribbean na Mexico.